Hogganoonni Itiyoophiyaa fi Ertraa Daangaa Irratti Ayyaana Waggaa Kabajan – Kichuu
HomePhoto GalleryHogganoonni Itiyoophiyaa fi Ertraa Daangaa Irratti Ayyaana Waggaa Kabajan
Guyyaa lamaan kana Tigraay keessatti oduun jabaan dhimma daandiin Zaalaanbassaa banamuuti. Daandiin kun banamuunTigiroota gamaa fi gamanaa bara 20f addaan bahan walitti deebisee jira. Aktivistoonni fi siyaasessitoonni Tigraay ammoo dhimmicha polotikaaf fayyadamaa jiru. Hariiroo biyyoota lamaan gidduutti argame kana hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa osoo hin taane hariiroo Tigraayii fi Eertiraa godhanii hafarsaa jiru.
Kana malees akka waan mootummaan Tigraayiin kophxeessee hariiroo Ertiraa waliin uummachuu barbaadee milkaahuufii dinnaan amma daandii Zaalaanbassaa kana banetti ololaa jiru. Jaalalli ummata Tagaaruu shira mootummoota lamaanii moohate jechaa jiru. Carraa argame kanatti fayyadamuudhaan miira siyaasaa Itoophiyaa keessatti kophxaawuu itti dhagahame hariiroo firooma Eertiraa jabeessuun akka waldhaannatan dhaadachaa jiru.
WAASHINGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo)—–Mummichi Ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad fi Prezidaantiin Ertraa Isaayyaas Afawarqii daangaa Buree fi Bibaay Simaa har’a ifatti bananii jiru.Hogganoonni biyyoota lameenii ayyaana waggaa haaraa sababeeffachuun daangaa kana bananii sana booda looltoota biyyoota lameeni waliin ayyaaneeffatanii jiru.